ပရိုမိုးရှငျး POH POH Gold and Jewellery
ဘာပဲလိုလို ပို့ပို့ စိန်ရွှေရတနာ နဲ့ အမိန့်ရအပေါင်ဆိုင်ကိုလှမ်းခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပေးလိုက်ပါရစေ…
ပို့ပို့မှာ ရွှေဝယ်မယ်ဆိုရင် ရွှေရည်ပြည့်မီလို့ စိတ်ချရတဲ့အပြင် အလျော့ထွက်ကလည်း မှန်ကန်စေရမယ်နော် . . . ဒီဇိုင်း လက်ရာဆိုလည်း သူမတူအောင် ဆန်းသစ်နေပြီးတော့ သိလိုသမျှကို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ရှင်းပြပေးတဲ့အပြင် ဝန်ဆောင်မှုကလည်းကောင်းဆိုတော့ ဘာလိုဦးမှာလဲ
တခြားရွှေဆိုင်တွေနဲ့ မတူတဲ့ နောက်ထပ်ထူးခြားချက် တစ်ခုကတော့ ပို့ပို့စိန်ရွှေရတနာဆိုင်မှာဝယ်တဲ့ ရွှေကို ပြန်ရောင်းတဲ့အခါမှာလည်း လုံးဝအရှုံးနည်းစေရမယ့်အပြင် မရောင်းချင်ဘူး ပြန်ပေါင်မယ်ဆိုရင်လည်း ဈေးပိုပေးသေးတယ်နော်။
ကဲ… ရွှေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ မဟာဆန်တဲ့ တော်ဝင်သူလေးတွေအတွက် ပို့ပို့ စိန်ရွှေရတနာ ဆိုင်မှာဘာပဲဝယ်ဝယ် Mobile Application ကပို့ပို့ဆိုင်စာမျက်နှာက Use Now ခလုပ်ကို နှိတ်ပြီး တော့ အကောက်ဖွင့်ထားတဲ့ ဖုန်းနာပါတ်ကိုထည့်သွင်းပေးပြီး တော့ Success စာမျက်နှာလေးကို့ ငွေရှင်းတဲ့အချိန်ပြပြီး ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ အထူးပရိုမိုးရှင်းလေးတွေလည်းရှိသေးတယ်နော်….
ရရှိမဲ့ ပရိုမိုးရှင်းလေးတွေကတော့ ပို့ပို့ရဲ့ မည်သည့်ဆိုင်ခွဲတိုင်းမှာမဆို အလျော့တွက် 10% Discount အပြင် ထီး၊ တီရှပ်၊ ပိုက်ဆံအိပ် (3) မျိုးထဲကနေပြီးတော့ (1) မျိုးကိုလက်ဆောင်ရရှိမှာပါ။
ပို့ပို့ စိန်ရွှေရတနာ နဲ့ အမိန့်ရအပေါင်ဆိုင်တွေရဲ့ လိပ်စာလေးတွေကတော့…..
ဆိုင်(၁) အမှတ်(၉၉)၊ စည်ပင်လမ်း၊ ၂၄- ရပ်ကွက်၊တောင်ဒဂုံ၊ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း- 09 5090330
ဆိုင် (၂) အမှတ်(၆)၊ ကံဘဲ့ဘူတာရုံလမ်း၊ ၁၂- ရပ်ကွက်(ဒေါင်ဘုရားရှေ့)။
ဖုန်း- 09 5096472
ဆိုင် (၃) အမှတ်(၆၈)၊ မြေညီထပ်၊စမ်းချောင်းလမ်းနှင့် မြင့်မိုရ်လမ်းထာင့်၊စမ်းချောင်းမြို့နယ်။
ဆိုင် (၄) အမှတ်(၈၅)၊ မြေညီထပ်၊ သတိပဌာန်လမ်း၊ အသောကဈေး(အနောက်ဘက်ဝင်ပေါက်ရှေ့)၊ကျောက်မြောင်း၊တာမွေမြို့နယ်။
ဖုန်း- 09 974503730
ဆိုင် (၅) တိုက်(၁၀)၊ ပိတောက်လမ်း(A)၊ ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်။
ဖုန်း- 09 73089471
ဆိုင် (၆) အမှတ်(၁၂၅)၊ ဦးချစ်မောင်လမ်း၊ ဆရာစံမြောက်/အနာက်ရပ်ကွက်၊ ဈေးကွေ့မှတ်တိုင်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်။
ဆိုင် (၇) အမှတ်(၁၂၉၅/ခ)၊ ပင်လုံလမ်းမ(၃၅)ရပ်ကွက်၊ ဆက်သွယ်ရေးမှတ်တိုင်၊ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်။
ဖုန်း- 09 777226626
အသေးစိတ်သိရှိလိုတယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် 09969910115, 09969910128 ကိုရုံးချိန်အတွင်းဆက်သွယ်စုံးစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
POH POH Gold and Jewellery ဆိုငျ
ဖုနျးနံပါတျ : 09 264 690 856
Ends Friday, November 01, 2019